शरीरमा यस्ता संकेत हुने मान्छे भाग्यमानी हुन्छन्! | Sindhuli Saugat
शरीरमा यस्ता संकेत हुने मान्छे भाग्यमानी हुन्छन्!
समुद्रशास्त्रले हरेक प्रकारको कुरा बताइरहेको हुन्छ । ज्योतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने यसले शरीरमा भएको अनेक प्रकारको संकेतलाई अध्ययन गरेर व्यक्तिको बारेमा बताउने गर्दछ ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार शरीरमा भएका यी संकेतहरुले तपाईको बारेमा निम्न कुराहरु बताउँछन् ।
६ वटा औँला
जुन पुरुषको छातीमा रौँ हुन्छ त्यस्ता पुरुषहरु धेरै ने शान्त र सरल स्वभावका हुन्छन् । पैसाको कुरा गर्ने हो भने यस्ता व्यक्ति धेरै नै धनी हुन्छन् र यीनीहरुलाई जीन्दगीभर कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन ।
पछिल्लाे - भुकम्पपीडितलाई आशमात्र नदेखाउ
अघिल्लाे - प्रेममा कहिलै धोका नदिने राशि भएका युवतीहरु